Trump oo u Aqoonsadey Qudus Caasimada Israa’iil iyo Jawaabaha laga Bixiyay
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Mareykanku haatan u aqoonsadey Qudus caasimada Israa’iil, islamarkaana uu bilaabayo sidii looga rari lahaa safaaradiisa Telefiif, isaga oo ka tallaabsaday siyaasad tobanaan sano Maraykaku ku soo jirey.
Madaxweynaha ayaa sheegay in uu Maraykanku uu haddana sii taageeri dooono xalka laba dowladood, haddii ay labada dhinacba sidaa oggolaadaan waa Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta e.
Go’aankan ka hor ayaa si weyn looga digey Trump cawaaqi xumada uu yeeelanayo dhawaaqiisu, balse taasi dhegaha ayuu ka fureystay.
Haseyeeshee ururka Falastiiniyiinta PLO ayaa sheegay in baaqa Trump yahay mid burburinaya xalka laba dawladood.
Madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa isna sheegay in aanu go’aanka Trump waxba ka beddeleyn xaqiiqada taalla dhulka Qudus.
Waxa kale oouu intaa ku durey in Mareykanku lumiyay doorkii Dhexdhexaadnimada ee wadahadalka nabadeed.
Turkiga ayaa canbaareeyay baaqa Trump oo uu sheegay inuu yahay mid masuuliyad darro ah.
Sida ay sheegtay wasaarada arrimaha dibadda Masar ayaa iyana diidey go’aanka ah in loo raro safaarada Mareykanka Qudus.
Ururka Xamaas ayaa ku booriyay dalalka carabta iyo dunida kaleba in ay awood tiraan baaqa Trump, ayna ka tagaan Yuhuuda.
Wasiirka dibadda Qadar ayaa isna sheegay in ay tahay u raridda safaarada mareykan Qudus mid halis ah oo jar iska xoornimo ah, iyo xukun dil ah oo lagu qaaday dadaalkii wadahadal.
Xoghayaha guud ee QM ayaa isagu sheegay in aanu jireyn xal aan aheyn laba dawladood, qorshe kalena iman karin.
Go’aankan ayaa la filayaa iuu cadho xooggan ka dhaliyo dunida carabta iyo muslimiinta, hase yeeshee Aqalka Cad ayaa sheegay in Trump uu aqoonsanayo kaliya arrin taariikhi ah oo wadata xaqiiqo hadda ah.
Go’aankan ka hor ayuu Trump khadka taleefonka kula xidhiidhay shan ka mid ah madaxda bariga dhexe, si uu ugu war-geliyo tallaabada uu qaadayo, waxaana ay kala yihiin raggaasi uu wargeliyay; ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Natenyahu, madaxweynaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas, boqorka Jordan Abdullah, madaxweynaha Masar Abdel Fattah el-Sissi iyo boqorka Sacuudiga Salman Bin Abdulaziz.
Bayaan ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in Trump uu madaxdaas u sheegay in ka go’an tahay inuu sare u sii qaado wada-hadallada Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta.
Dalalka Carabta ayaa horey uga digay tallaabada Trump. Wasiirka arrimaha dibedda Jordan, Ayman Safadi ayaa sheegay inuu u sheegay xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Rex Tillerson “cawaaqibka qatarta leh” ee ka dhallan kara haddii Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsado caasimadda Israel.
“Go’aan noocaas ah wuxuu kicin doonaa cadho ka dhacda dalalka Carabta, iyo xiisad halis gelisa dadaallada nabadeed” ayuu Safadi ku qoray barta twitter-ka.
Sidoo kale waxaa Trump sheegay in safaaradda Mareykanka ee ku taalla Tel Aviv loo raro Qudus, balse waxaa la leeyahay waxay taasi qaadan kartaa sannado.
Arrintan laga filayo dowladda Mareykanka ee ah in Qudus loo aqoonsado in ay tahay caasimadda Israa’iil ayaa dhalisay cadho caalami ah iyo digniino.
Sidoo kale wuxuu tallaabadaasi ku tilmaamay in ay la mid noqoneyso “shaacin dagaal”.
“Wuxuu noqonayaa rarkii ugu dambeeyay ee dhabarka ka jebiya ratiga,” ayuu yidhi. “Ulama jeedo dagaal gacan ka hadal ah, balse waa dagaal diblumaasiyadeed.”
Si kastaba ha ahaatee, Xudduudaha gaarka ah waxay sii ahaan doonaan muwduuca heshiiska ugu dambeeya, sida ay saraakiishaasi sheegeen. Waxay intaa ku dareen in xaaladda goobaha barakeysan aysan arrinta saameyn doonin.